FAQ - Guangzhou Asiaprint Industrial Co., Ltd.
Milina fanontam-pirinty hafanana
Semi mandeha ho azy
Fa maninona no mifidy Asiaprint?
1. 19+ taona mahery niainana.
2. Manomeza tolotra OEM, ODM.
3. Fanohanana tecnology nomerika tsara indrindra - sorohy ny olana mandritra ny famokarana.
4. Manolora tolotra matihanina an-tserasera, horonan-tsary, eo an-toerana aorian'ny serivisy fivarotana.
Inona no tanjon'ny milina fanodinana?
Fanindriana hafanana no masinina izay manindry ny famindrana mankany amin'ny substrate azo afindra. Amin'ny fampiasana hafanana ambony sy fanerena mavesatra mandritra ny fotoana maromaro, dia tafiditra ao anaty vokatra maharitra hatrany ny famindrana.
Ny milina fanodinana hafanana dia asaina ho an'ny vokatra matihanina sy mahafa-po fotsiny satria ny fitaovana fanosotra mahazatra sy ny vy ao an-trano dia tsy mahazo eny akaikin'ny mari-pana takiana amin'ny famindrana azo antoka.
Ary ny kalitaon'ny milina vita?
Ny milina fanontam-pirinty hafanana rehetra dia voasedra mafy amin'ny fomba manaraka alohan'ny fandefasana azy.
Alefaso ny milina fanodinana hafanana, avelao hanafana hatramin'ny 220 degre Celsius; Avy eo dia ampiasao lamba pirinty fanadinana taratasy famindrana mainty. milina famindrana hafanana
Ahoana no fomba hahazoako fanazavana bebe kokoa aminao?
Azonao atao ny mandefa eamil, fax na telefaona aminay. Ankasitrahana izany amin'ny skype ID, whatsapp ID, Webchat ID na SNS hafa.
Fanontaniana natokana ho an'ny milina?
Ok ny serivisy OEM / ODM, miankina amin'ny volavolanao ny famokarana.
Misy vonona ny hampianatra ny horonan-tsary anao hamory sy hametraka tsikelikely.
Misy injeniera afaka manompo any ivelany?
Eny, fa ianao no mandoa ny saram-pitaterana. Ka raha te hitahiry ny vola lany ianao dia handefa horonantsary feno fametrahana masinina antsipirihany izahay ary hanampy anao hatramin'ny farany.
Ahoana no ahafahako mijery ny kalitao alohan'ny fandefasana?
Haka sary sy sary an-tsary aminao izahay, inona no fonosana anaty baoritra ary toa izany.
Raha manana olana ara-teknika aho, ahoana no hanampianao anay hamaha azy?
Ny famaritana, sary na horonan-tsary amin'ny antsipiriany dia hanampy ny teknisianay hamakafaka ny olana ary hanome vahaolana mifanaraka amin'izany. Afaka mifampiresaka amin'ny Internet izahay.
Inona ny fomba fandoavanao vola?
Ny fomba fandoavam-bola dia T / T (Wire Transfer) na LC, PAYPAL, Western Union sns miankina amin'ny tsy fitovian'ny firenena.
Ahoana ny amin'ny Warranty momba ny masininao?
Fiantohana 12 volana ho an'ny masininay. Mandritra ny vanim-potoana fiantohana dia handefa ampahany maimaimpoana ho an'ny fanoloana (board circuit) izahay raha ny ampahany tapaka kosa dia tokony halefa hiverina.
Azontsika alefa any amin'ny orinasa misy anao ve ny teknisiana anay?
Eny, tongasoa anao tokoa ny fitsidihana anay maimaimpoana.
Asiaprint dia mitazona ilay hevitra miaraka amin'ny "S ...
Androany no nanondrananay ireo milina fanodinana hafanana roa tany Vietnam. Ny baiko milina famindrana hafanana dia feno amin'ity roa volana ity ary manemotra ny sasany amin'ny kaomandy ary miteraka ny tsy fetezana ...
Ahoana ny fomba hampiasana ny horonana hanakodia hafanana pres ...
Dingana fiasa 1. Hamarino tsara fa mampifandray herinaratra dingana telo ianao. Tsindrio ny bokotra "Blanket Enter", ny lamba firakotra hanakaiky kokoa ny amponga ary ny "Blanket Action Ind ...
ASGA 2017 any Vietnam
Ny ASGA Show At Vietnam dia fahombiazana lehibe ihany koa tamin'ity taona ity. Ny milina fanodinam-pandehanay dia nankafy ny lazany indrindra toa ny nantenainay. Raha ny fihinan'izy ireo dia apetrakay miaraka amin'ny vidiny mirary ny masinina ara-toekarena ...
Ahoana ny fanovana ny menaka mafana?
Fampisehoana ny menaka mafana: Fahombiazan'ny hafanana avo, fahamendrehana tsara, hafanana avo lenta ary coefficient amin'ny fitondra hafanana. Na izany aza, hitranga ny menaka hafanana Chain fracture betw ...
SGIA 2016 ao Etazonia
Ny seho SGIA 2016 tany Las Vegas dia goavana sy marevaka toy ny tanàna nampiantrano azy. Izahay tao amin'ny ASIAPRINT dia faly indrindra tamin'ity seho ity satria nanana antony mihoatra ny iray ny fahatsapàna izany. Tsy hoe satria manana wonde isika ...
Adiresy: Floor 1-1, Dajiangyun Street, Longgui South Village, tanànan'ny Guangzhou, faritanin'i Guangdong, Sina
© Copyright - 2016-2021: Voatahiry ny zonao rehetra.